Maraykanka oo muranka Wabiga Niil dartii u hakiyay kaalmadii Itoobiya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maraykanka oo muranka Wabiga Niil dartii u hakiyay kaalmadii Itoobiya
Maraykanka oo muranka Wabiga Niil dartii u hakiyay kaalmadii Itoobiya
Maraykanka ayaa hakiyay qayb ka mid ah kaalmada ay siiyaan Itoobiya kaddib markii wax horumar ah laga gaari waayay wadahadalada u dhaxeeya Masar, Suudaan iyo Itoobiya ee la xiriira sida loo buuxinayo biyo xireenka Itoobiya ay ka dhiseyso wabiga Niil.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay in kaalmada qaar ee la siiyo Itoobiya la hakin doono kagadaal markii Itoobiya ay go’aansatay inay iskeed u buuxiso biyo xireenka iyada oon heshiis laga gaarin.
Ma cadda inta ay la egtahay kaalmada la hakiyay , laakiin ilo ka tirsan wakiilada Maraykanka ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in ay gaareyso 100 Milyan oo Dollar oo qayb ka ah kaalmada Maraykanka.
Itoobiya ayaa muran xooggan waxa uu kala dhaxeeya Masar iyo Suudaan oo si weyn uga soo horjeeda in biyo xireenka ay Itoobiya dhiseyso la buuxiyo iyada oon heshiis lagu ahayn sida loo buuxinao iyo waqtiga lagu buuxin karo. Itoobiya ayaa sheegtay inay dooneyso biyo xireenka in koronto laga dhaliyo si ay dadkeeda uga qafiifiso saboolnimada.
Previous articleMaraykanka oo cunoqabateyn kusoo rogay dacwad oogayaasha maxkamadda ICC
Next articleJubbaland oo bilowday baaritaanno la xiriira musuq